1 Samueri 20 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Motu Mutauro Wemasaini WekuJamaica Mutauro Wemasaini wechiBelgian French Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Navajo Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pennsylvania German Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Roman) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zulu
Bhuku Rekutanga raSamueri 20:1-42
Jonatani anoramba achitsigira Dhavhidhi (1-42)
20 Dhavhidhi akabva atiza achibva muNayoti kuRama. Zvisinei, akaenda kuna Jonatani akati: “Ndakaitei?+ Mhosva yandakapara ndeyei, uye chii chandakatadzira baba vako chiri kuita kuti vade kundiuraya?”* 2 Jonatani akabva ati kwaari: “Hazvimboiti!+ Hausi kuzofa. Inzwa! Hapana chinoitwa nababa vangu chavasingandiudze, chingava chinhu chikuru kana kuti chidiki. Baba vangu vangandivanzira nyaya iyi here? Havangambodaro.” 3 Asi Dhavhidhi akapika zvakare, akati: “Baba vako vanotozviziva kuti unondifarira,+ uye vanogona kuti, ‘Musaita kuti Jonatani azvizive nekuti angatsamwa.’ Asi chokwadi, naJehovha mupenyu uye neupenyu hwako,* panongova nenhanho imwe chete pakati pangu nerufu!”+ 4 Jonatani akabva ati kuna Dhavhidhi: “Ndichakuitira zvese zvauchataura.”* 5 Dhavhidhi akati kuna Jonatani: “Mangwana kugara kwemwedzi,+ uye ndiri kutotarisirwa kuti ndigare pamwe namambo ndidye naye; rega ndiende uye ndichanohwanda musango kusvikira manheru pazuva rechitatu. 6 Kana baba vako vakandishaya, uti, ‘Dhavhidhi akandikumbira achiteterera kuti ndimubvumire kumhanya kuguta rake reBhetrehema,+ nekuti kune chibayiro chegore negore ikoko chemhuri yese.’+ 7 Kana vakati, ‘Zvakanaka,’ ziva kuti muranda wako haana chekutya. Asi kana vakatsamwa, ziva kuti chokwadi vasarudza kundiitira zvakaipa. 8 Ratidza muranda wako rudo rusingachinji,+ nekuti wakaita sungano nemuranda wako pamberi paJehovha.+ Asi kana ndiine mhosva,+ ndiuraye iwewe. Ungandiendeserei kuna baba vako?” 9 Jonatani akabva ati: “Handingambofungi zvakadaro pamusoro pako! Kana ndikaziva kuti baba vangu vasarudza kukuitira zvakaipa, ndingarega kukuudza here?”+ 10 Dhavhidhi akabva ati kuna Jonatani: “Ndiani achandiudza kana baba vako vakakupindura nehasha?” 11 Jonatani akati kuna Dhavhidhi: “Handei kusango.” Saka vakabuda, vakaenda kusango vari vaviri. 12 Jonatani akati kuna Dhavhidhi: “Jehovha Mwari waIsraeri ngaave chapupu, kuti mangwana panguva inenge ino, kana kuti pazuva rechitatu, ndichaona kuti baba vangu vanofungei nezvako. Kana vachifarira Dhavhidhi, ndingarega kutumira shoko ndichikuudza here? 13 Asi kana baba vangu vachida kukuitira zvakaipa, Jehovha ngaaite saizvozvo kuna Jonatani uye ngaawedzere pazviri, kana ndikasakuudza uye ndikasakurega uchienda murugare. Jehovha ngaave newe,+ sezvaakava nababa vangu.+ 14 Uye iwe ungarega here kundiratidza rudo rusingachinji rwaJehovha ndichiri mupenyu uye kunyange kana ndafa?+ 15 Ramba uchiratidza rudo rusingachinji kuimba yangu,+ kunyange kana Jehovha aparadza vavengi vaDhavhidhi vese panyika.” 16 Saka Jonatani akaita sungano neimba yaDhavhidhi, achiti, “Jehovha achaita kuti vavengi vaDhavhidhi varangwe.” 17 Saka Jonatani akaita kuti Dhavhidhi apike zvakare nerudo rwake kwaari, nekuti aimuda semadiro aaizviita.*+ 18 Jonatani akabva ati kwaari: “Mangwana kugara kwemwedzi,+ uye uchashayikwa, nekuti chigaro chako chichange chisina munhu. 19 Pazuva rechitatu vachatobvunza nezvako; uye unofanira kuuya kunzvimbo yawakahwanda zuva riya,* woramba uri pedyo nedombo riri pano. 20 Ini ndichabva ndapfura miseve mitatu kune rimwe divi redombo racho, sekunge kuti pane chandiri kupfura. 21 Pandichatuma muranda, ndichati, ‘Enda unotsvaga miseve.’ Kana ndikati kumuranda wacho, ‘Miseve iri kudivi rako iri, itore,’ unogona hako kudzoka, nekuti chokwadi naJehovha mupenyu, zvinoreva kuti kune rugare uye hapana chekutya. 22 Asi kana ndikati kumukomana wacho, ‘Miseve iri mberi kwako,’ iwe ibva waenda, nekuti Jehovha ari kuda kuti uende. 23 Asi pane zvatavimbisana,+ Jehovha ngaave pakati pedu nekusingaperi.”+ 24 Saka Dhavhidhi akahwanda musango. Mwedzi pawakagara, mambo akagara pachigaro chake kuti adye.+ 25 Mambo akanga akagara pachigaro chake chemazuva ese pedyo nemadziro. Jonatani akanga akatarisana naye, uye Abhineri+ akanga akagara padivi paSauro, asi nzvimbo yaDhavhidhi yakanga isina munhu. 26 Sauro haana chaakataura zuva iroro, nekuti aiti: ‘Pane zvaitika zvaita kuti ave munhu asina kuchena.+ Chokwadi anofanira kunge asina kuchena.’ 27 Zuva rakatevera racho pashure pekugara kwemwedzi, pazuva rechipiri, nzvimbo yaDhavhidhi yakaramba isina munhu. Sauro akabva ati kuna Jonatani mwanakomana wake: “Nei mwanakomana waJese+ asina kuuya kuzodya nezuro kana nhasi?” 28 Jonatani akapindura Sauro kuti: “Dhavhidhi akandikumbira achiteterera kuti ndimubvumire kuenda kuBhetrehema.+ 29 Akati, ‘Ndapota, ndibvumire kuenda nekuti tine chibayiro chiri kupiwa nemhuri yedu muguta, uye mukoma wangu akandishevedza. Saka kana wandinzwira nyasha, ndapota ndirege ndingomhanya kunoona vakoma vangu.’ Ndokusaka asina kuuya patafura yamambo.” 30 Sauro akabva atsamwira Jonatani kwazvo, akati kwaari: “Iwe mwanakomana wemukadzi anopanduka, unofunga kuti handizvizive here kuti uri kusarudza kutsigira mwanakomana waJese kuti uzvinyadzise iwe uye unyadzise amai vako? 31 Kana mwanakomana waJese ari mupenyu panyika pano chete, umambo hwako hahuzombosimbi.+ Saka tuma munhu kuti auye naye kwandiri, nekuti anofanira kufa.”*+ 32 Zvisinei, Jonatani akati kuna baba vake Sauro: “Anofanira kuurayirwei?+ Chii chaaita?” 33 Sauro akabva akanda pfumo kwaari kuti amuuraye,+ saka Jonatani akaziva kuti baba vake vakanga vasarudza kuuraya Dhavhidhi.+ 34 Jonatani akabva angosimuka patafura akatsamwa kwazvo, uye haana chaakadya pazuva rechipiri pashure pekugara kwemwedzi, nekuti akanga achinetseka pamusoro paDhavhidhi,+ uye baba vake vakanga vamunyadzisa. 35 Ava mangwanani Jonatani akaenda kusango kuti anoonana naDhavhidhi sezvavakanga vavimbisana, uye akanga aine muranda wechidiki.+ 36 Akati kumuranda wake: “Ndapota, mhanya unotsvaga miseve yandiri kupfura.” Muranda wacho akamhanya, uye Jonatani akapfura museve ukaenda mberi kwake. 37 Muranda wacho paakasvika panzvimbo yaiva nemuseve wakanga wapfurwa naJonatani, Jonatani akashevedzera kumuranda wacho achiti: “Museve wacho hausi mberi kwako here?” 38 Jonatani akashevedzera kumuranda wacho achiti: “Mhanya! Kurumidza! Usanonoka!” Muranda waJonatani akabva anhonga miseve yacho akadzoka kuna tenzi wake. 39 Asi muranda wacho haana kuziva zvaiitika; Jonatani naDhavhidhi chete ndivo vaiziva zvazvaireva. 40 Jonatani akabva apa muranda wake zvombo zvake akati kwaari: “Enda nazvo kuguta.” 41 Muranda wacho paakaenda, Dhavhidhi akasimuka panzvimbo yaiva pedyo kumaodzanyemba. Akabva apfugama, akadzikisa musoro wake katatu, uye vakatsvodana vakachema vese, asi Dhavhidhi ndiye akanyanya kuchema. 42 Jonatani akati kuna Dhavhidhi: “Enda nerugare, sezvo tese tapika+ muzita raJehovha, tichiti, ‘Jehovha ngaave pakati pangu newe nepakati pevana* vangu nevana* vako nekusingaperi.’”+ Dhavhidhi akabva asimuka akaenda, uye Jonatani akadzokera kuguta.
^ Kana kuti “vatsvage mweya wangu.”
^ Kana kuti “neupenyu hwemweya wako.”
^ Kana kuti “zvichataurwa nemweya wako.”
^ Kana kuti “aaiita mweya wake.”
^ ChiHeb., “pazuva rebasa.”
^ ChiHeb., “nekuti mwanakomana werufu.”
1 Samueri 20